Bijay Shahi संग फर्मुला नै छैन १०० % ठोकेर भन्छु ! बिजय भाई झुटको खेती धेरै नगर, बाहिरियो नालीबेली | Public 24Khabar
Home News Bijay Shahi संग फर्मुला नै छैन १०० % ठोकेर भन्छु ! बिजय...
Bijay Shahi संग फर्मुला नै छैन १०० % ठोकेर भन्छु ! बिजय भाई झुटको खेती धेरै नगर, बाहिरियो नालीबेली
Bijay Shahi संग फर्मुला नै छैन १०० % ठोकेर भन्छु ! बिजय भाई झुटको खेती धेरै नगर, बाहिरियो नालीबेली.
काठमाडौं । के तपाइँको उमेर नपुगी युवा अवस्थामै कपाल फुल्ने समस्याबाट हैरान हुनुभएको छ रु छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस् त्यसलाई घरमै उपचार गर्न सकिने छ। कालो कपालले मानिसको सुन्दरता अझै बढाउँछ । तसर्थ युवा उमेरमै कपाल फुल्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन यी सजिला घरेलु उपाय अपनाउनुस्।
३. प्याजको रस
जानिराखौं, नियमित नेलपोलिस प्रयोग गर्दा हुने हानीहरु
श्रीमान श्रीमतीले भुलेर पनि नगर्नु यस्तो गल्ती, जन्मन सक्छ तेस्रो…
५. तिलको तेल
६. बदामको तेल
७. लौकाको रसमा जैतुनको तेल वा तिलको तेल मिसाएर आफ्नो टाउको र कपालमा मालिस गर्नुस् । चौलाई (एक प्रकारको हरियो सब्जी)को ताजा रसले कपालको प्राकृतिक रंग बनाउने, कपाल झर्न रोक्ने र कपाल फुल्न रोक्नेमा मद्दत गर्छ।
Previous article१ अर्ब लगानीमा नेपालमै सुरू भयो मोटरसाइकल उत्पादन, यस्तो हुने भयो बाइकको मुल्य, ३०० लाई रोजगारी
Next articleलोकप्रिय गायक बिष्णु खत्रीले ल्याए रिनै रिनको हृदयस्पर्शी गीत (भिडियो सहित)